I-Aalto Cottage Bed and Breakfast! - I-Airbnb
I-Aalto Cottage Bed and Breakfast!
Indlu engasemva yonke sinombuki zindwendwe onguLyn
I-Aalto Cottage yindlu yesitudiyo esiziphetheyo eseLunawanna eDaniels Bay. Le yindawo ezolileyo, yabucala yeSiqithi saseBruny kodwa ikufutshane neendawo ezininzi zokuhamba kunye nezinto ezinomtsalane kwiSiqithi. I-cottage ikufuphi nekhaya losapho kodwa inemithi emininzi kunye nezihlahlana zokubonelela iindwendwe zabucala. Siya kunxibelelana kuphela ukuba ufuna uncedo oluthile.
Ngenxa ye-coronavirus sithathe amanyathelo ongezelelweyo ukucoca kunye nokucoca iindawo ezihlala ziphathwa phakathi kogcino
Indawo yokuphola yomntu omnye okanye abantu abathandanayo egadini enendawo yayo yokungena nenendawo yokupaka eyaneleyo. SiseSouth Island, indawo entle yokuqhuba imizuzu eyi-40 ukusuka esikhepheni ngaphandle kokuba uye kwivenkile entle yaseBruny Island Honey, Fumana iShuck Oyster Bar okanye iCheese Factory ukuze ufumane izinto ezintle xa usendleleni!
Njengoko uqhuba umzantsi, thatha indawo entle ukusuka kwindledlana yentamo ejonge i-Adventure Bay ukuya empuma kunye neSimpsons bay kunye neD 'Entrecastreaux Channel ukuya entshona.
Sinikezela ngesidlo sakusasa esisemgangathweni esenziwe ngesonka sasekhaya (ukuhlala iintsuku eziyi-2), ingqolowa, ubisi, i-yoghurt eyenziwe ekhaya kunye nesosi ye-berry, ijusi, imijelo eyenziwe ekhaya, iziqhamo kunye neti/iindawo zekofu.
Iindawo ezimbini zokutya okumnandi
Ihotele i-Bruny - malunga neekhilomitha eziyi-6 ukusuka kwindlu esemaphandleni; isidlo sasemini kunye nesangokuhlwa yonke imihla.
kunye neBruny Winery malunga neekhilomitha eziyi-2 ukusuka kwindlu esemaphandleni.
(isidlo sasemini yonke imihla, kunye nesidlo sangokuhlwa ngoMgqibelo ebusuku i-COVID ivumela!).
Iinombolo zefowuni zinganikezelwa kwaye ukubhukisha kucetyiswa ngamaxesha axakekileyo. Bobabini banokutya okumnandi.
Sicebisa ukuba ukhangele phambili kuzo zombini ezi ndawo ukuze ubhukishele ukutya kwasebusuku.
Ukubukela iintaka kuthandwa kakhulu kwindawo yethu kwaye sibona ii-eagles zolwandle, ii-cockatoos ezimnyama, ii-swift parrots, amehlo esiliva, ii-wrestens, abatya ubusi kunye nezinye iintlobo ezininzi zeentaka.
Sineendwendwe ezininzi zasekuhlaleni- iindawo zokuhamba ngeenyawo, ii-ravailaits, ii-paddy melons, ii-echidnas kunye nezinye izinto ezintle.
Ukuba uhlala eTasmania iveki okanye ezimbini sicebisa ukuba ubuze ngeepaki ezigqithayo. Oku kwenza ukuba uye kuzo zonke iiPaki Zesizwe zaseTasmania kuquka inqaba enesibane phezulu kunye neCloudy Bay eBruny.
4.94 · Izimvo eziyi-279
Le ndlu ikwindawo eyayisakuba lihlathi lepine kodwa ngoku ijikelezwe ziigadi zemveli, amatyholo endalo kunye neziqhamo kunye nemifuno. Yindawo ezolileyo kakhulu kwaye yabucala apho unokubona ubomi beentaka ngaphakathi kwindlwana okanye kwipatio ngaphambili. Sinolwandle olukufutshane olukhuseleke kakhulu ekuqubheni kwaye ukuba ungathanda ukuthatha inxaxheba singakunika iitawuli zaselwandle ukuze uzisebenzise.
Umbuki zindwendwe ngu- Lyn
Sihlala kwipropathi kwaye siya kukwamkela kwindawo yakho yobuqu ukuze sikunike ulwazi lwasekhaya kwesi siqithi, imisebenzi yaso emininzi kunye neendawo ezintle zokundwendwela. Emva koko sikushiya ukuba uhlolisise iSiqithi sisazi ukuba ukuba uneminye imibuzo siyavuya ukukunceda. Ukuba ukhetha singashiya isitshixo kwibhokisi yokutshixa.
Sine-pug encinci ethanda ukuthi molo kwaye emva koko uphume endleleni yakho; ningamkholelwa ukuba uthi angangena eCottage. Kukwakho neechoki zethu zabahlali... iinkukhu ezili-10, nemiqhagi emi-4 yokujonga amantombazana!
Sihlala kwipropathi kwaye siya kukwamkela kwindawo yakho yobuqu ukuze sikunike ulwazi lwasekhaya kwesi siqithi, imisebenzi yaso emininzi kunye neendawo ezintle zokundwendwela. Emva…